Izindaba - Amaphuzu amathathu esitezi, amaphuzu ayisikhombisa wokufakwa, abantu abaningi abayinaki le mininingwane yokufakwa phansi!
Bekulokhu kunesisho embonini yezitezi esithi uhla lwamapulangwe “luyisitezi samaphoyinti amathathu nokufakwa kwamaphoyinti ayisikhombisa”, okusho ukuthi, ngabe ukufakwa kuhle noma cha kunquma u-70% wekhwalithi yaphansi. Ukusetshenziswa okungagculisi kwephansi kudalwa kakhulu yivulekele elingafanele.
Ngakho-ke, ukuze kwenziwe ifulethi libe elisha njengokusha, akubangelwa ikhwalithi nekhwalithi yaphansi kuphela, kepha futhi nokufakwa okulungile nokunakekelwa ngokucophelela. Namuhla sizobheka imininingwane yokwakhiwa kwephahla!
Ukulungiselela ukugcina kufanele kube khona
Ukuhlolwa okuphelele kwendawo evulekileyo ngaphambi kokuba kuvulwe indawo kuyisihluthulelo, okuyisixhumanisi esibalulekile sokuqinisekisa ikhwalithi ye-paving.
Ukushesha akwanele. Iphansi libekwa ngaphandle kokuhlolwa okuphelele kwemvelo, okujwayele ukuba nezinkinga zekhwalithi. Ngaphambi kokufaka uphahla, yenza lawa maphuzu ayi-7 bese uqala ukuhambisa.
Okokuqala, linganisa okuqukethwe kwamanzi aphansi
Sebenzisa imitha lokuqukethwe umswakama ukukala umswakama womhlabathi, izinga elijwayelekile lomhlabathi lingu- <20%, kanti izinga lokufaka i-geothermal lingu- <10%.
Umthamo wamanzi wephansi eligandayiwe uphezulu kakhulu, futhi iphansi limunca amanzi futhi liyanwebeka, okulula ukudala izinkinga ezifana nokugoqa, ukubetha isigubhu, nomsindo. Ukwehliswa kwesidumbu kuyadingeka ngalesi sikhathi ukugwema izinkinga ekusetshenzisweni okulandelayo.
Okwesibili, ngaphezu kwezitezi ze-SPC, kufanele kubhekwe izitezi zamapulangwe ukuthola umuhlwa
Izimbobo zezintuthwane zamadike ezinkulungwane ziwile, futhi umuhlwa uyingozi enkulu. Imisebenzi yokuhlola neyokuvimbela kufanele yenziwe ngaphambi kokufakwa, uma kungenjalo kuzobe sekwephuze kakhulu lapho kutholakala.
Okwesithathu, hlola ukuthamba komhlaba
Uma isicaba somhlaba singekho ezingeni, kulula ukudala izinkinga ezinjengokuqhekeka komphetho, ukugoba, ukugoqa, nomsindo. Umsebenzi wokulinganisa kufanele wenziwe ngaphambi kokuba kuvulwe.
Imvamisa sisebenzisa irula elingamamitha amabili lokuncika kukakhaphethi. Uma kukhona igebe elingaphezu kuka-3 mm noma ngisho no-5 mm ngaphansi kombusi, kusho ukuthi umhlabathi awulingani futhi weqe izidingo zokubekwa ezitezi zokhuni.
Okwesine, hlola ukuthi umhlaba uqinile yini
Uma umhlabathi ungekho ngokwanele, ungawukhahlela phansi umlotha ngezinyawo zakho. Lokhu yilokho esivame ukukusho. Lesi simo siyacasula kakhulu ukusihlanza ngemuva kokufaka phansi. Akunandaba ukuthi uwahlanza kanjani amakhona, uzogcina uthule phansi.
Abantu abahamba phansi babenengcindezi futhi babangela ukuthi wonke umlotha uvele ezinhlangothini ezishelelayo nasemakhoneni. Lokhu kudalwe wukucutshungulwa okunganele kwezimpande lapho umhlaba ulinganiswa.
Uma kukhona izimbotshana noma izenzakalo zokuxebuka, udinga ukwelapha kabusha umhlabathi, ngaphandle kwalokho kuzothinta kalula impilo yenkonzo esephansi.
Okwesihlanu, gwema ukusebenza okuxubana
Inqubo yokwakha phansi kufanele yenziwe ngemuva kokuphothulwa nokwamukelwa okufanele kwephrojekthi efihlwe phansi, iphrojekthi yophahla, iphrojekthi yezodonga, nephrojekthi yamanzi nogesi. Uma ukusebenza kwesiphambano kulula ukudala umonakalo phansi, uma iphrojekthi yedonga ingaqediwe, i-gravel ewayo izodala uthuli nokuklwebheka. Izinkinga ezinjengokonakala phansi, nezinkinga ezinjengokufafaza upende nokugqokiswa phansi nokulimaza ubuhle baphansi.
Ngaphezu kwalokho, uma kunezinkinga emsebenzini wokuxuba, imithwalo yemfanelo engacacile izophazamisa nokuvikelwa kwamalungelo.
Okwesithupha, ukubonisana nokumakwa okufihliwe
Ngaphambi kokuqala ukwakhiwa, umnikazi kufanele akhombise lapho kukhona khona iphrojekthi efihliwe futhi enze uphawu oluqavile ukugwema ukulimala kwamapayipi amanzi ashumekiwe, amapayipi omoya, izintambo zikagesi nezintambo zokuxhumana ngesikhathi sokwakha, nokugwema ukulimala kwesibili kokuhlobisa.
Okwesikhombisa, noma ngabe izindlela zokuvimbela amanzi zikhona (i-SPC floor ayidingi ukubheka izinyathelo ezingangeni manzi)
Phansi wesaba amanzi. Ngemuva kokungena kwamanzi, kuzoba nezinkinga ezinjengokushaywa ngamabhamuza, ukushwabana kanye nokusonteka, okwenza kungasebenziseki. Ngakho-ke, udinga ukuhlola izinyathelo ezingangeni manzi ngaphambi kokuba kuvulwe indawo nokuthi kukhona yini ukuvuza kwamanzi endlini. Uma kunesimo esinjalo, kufanele silashwe ngaphambi kokubeka phansi.
Eyesishiyagalombili, ukuhlobisa umcimbi omkhulu. Ukweqiwa okuncane kungaholela kalula emicimbini emikhulu. Lapho wonke umuntu ethenga ifulethi elihle futhi elinde ukufakwa, ungakhohlwa umsebenzi wokuqala. Amalungiselelo okuqala enziwe kahle futhi indlu ithokomele.
Izitolo ezivamile zokubeka phansi zinabaphathi bazo bokufaka, abazothola ukuqeqeshwa okuhlangene ngaphambi kokuthatha lo msebenzi, ngakho-ke lezi zinto zingagwenywa.
Uma uthenga phansi phansi futhi uqasha isifaki ngokwehlukana, lapho-ke kufanele ukhumbule la maphuzu, futhi uthathe izinyathelo zokuphepha kusengaphambili ukugwema izinkinga eziningi ~